FARITRA ATSINANANA : Tsy azo atao intsony ny mitondra razana ivelan’ny Faritra nanomboka ny 21 mey
Mivoatra hatrany ny paikady entina hiadiana amin’ny valanaretina coronavirus ao Toamasina. 22 mai 2020
Tapaky ny komitim-paritra miady amin’ny coronavirus Atsinanana sy ny BNGRC nasionaly fa tsy azo atao intsony ny mitondra razana ivelan’ny Faritra nanomboka ny 21 mey teo.
Izany no natao dia mba ho fisorohana amin’ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara sy mba hialana amin’ireo olana isan-karazany atrehina eny an-dalana mandritra ny fitondrana ny razana. Tonga tao Toamasina mihitsy ny Tale jeneralin’ny BNGRC nifampidinika tamin’ireo mpikambana ao anatin’ny Komity CCO Atsinanana. Ho an’ny ao Toamasina, dia misafidy toeram-pandevenana telo ny fianakavian’ny mana-manjo na fasam-bahiny na Marokarazana na Manangareza. Tsara ny manamarika fa ny fahafatesana rehetra no voakasika amin’izao fanapahan-kevitra izao fa tsy ny olona matin’ny coronavirus ihany.
Ho an’i Toamasina manokana, anisany mitondra ny tolo-tanana amin’ny ady atao amin’ny valanaretina ny orinasa Sicam. Efa nisy ny fanoloran’ity orinasa ity fiara tsy mataho-dalana iray hampiasain’ny komity. Fantatra ihany koa fa nanolotra bus miisa 5 izy ireo amin’izao fotoana izao hampiasain’ny CCO Atsinanana hatrany.
Ny roa omena hampiasain’ny talem-paritry ny fahasalamana sy ny hopitaly manara-penitra, ny telo ambiny kosa hoampiasain’ ny BMH, ny Kaominina, ny mpiandro filaminana ary ny mpanao gazety ao Toamasina amin’ny asany rehetra amin’ny ady atao amin’ny coronavirus. Efa misy ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana ireto bus ireto avy tamin’ny orinasa Sicam ireto.